Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) - Hello Sayarwon
Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) ကဘာလဲ။
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုသည် မှာ ယားယံခြင်း သို့မဟုတ် နာကျင်ခြင်း နှင့်အတူ သမရိုးကျမဟုတ်သော အနံ့ သို့မဟုတ် အသွင်အပြင်ရှိ သော အရည်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ ထိုအရာများသည် သင့်ခန္ဓါကိုယ်တွင် တစ်စုံတစ်ခု မှားနေသည်ဟု ဖော်ပြပါ သည်။ မိန်းမကိုယ် အရည်ဆင်းခြင်းတွင် အရည်နှင့် မိန်းမ ကိုယ်တစ်လျှောက် ကြွေဆင်းလာသော ဆဲလ်များ ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် အမျိုးသမီး မျိုးပွားစနစ်တွင် အရေး ကြီးသော ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမကိုယ် အား သန့်ရှင်စေပြီး ရောဂါပိုးကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှမဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်း ဖြစ်ပါက သင် သည် မသက်မသာ ခံစားရနိုင်သည်။
Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဤကျန်းမာရေး အခြေအနေသည် အဖြစ်များပါသည်။ မည်သည့် အသက်အရွယ်တွင် မဆို ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ပျိုဖော်ဝင်ချိန် မရောက်သေးသော အမျိုးသမီးငယ်များနှင့် အသက်ကြီး သော အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်လေ့မရှိပါ။ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော အချက်များကို လျော့ချခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ် နိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသော အချက် အလက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ပါ။
Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်း၏ အဖြစ်များသော ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
အရောင် သို့မဟုတ် စေးကပ်မှု ပြောင်းလဲခြင်း
ရုတ်တရက် အနံ့ မကောင်းခြင်း
အရည်များ ပုံမှန်မဟုတ်စွာ များပြားခြင်း
မိန်းမကိုယ် အပြင်ဘက်တွင် ယားယံခြင်း၊ တင်ပဆုံ သို့မဟုတ် ဝမ်းဗိုက်တွင် နာကျင်ခြင်း
မိန်းမကိုယ်မှ မမျှော်လင့်ဘဲ သွေးထွက်ခြင်း
အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် သွားရောက် ပြသ ပါ။
အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်၊ ထူပျစ်သော မိန်းမကိုယ် အရည်ဆင်းခြင်း
မိန်းမကိုယ် သို့မဟုတ် မိန်းမကိုယ်ဝန်းကျင်ရှိ အရေပြားနှင့် ဆီးထုတ်ပြွန်တွင် နီရဲခြင်း၊ ယားယံခြင်း ၊ ပူလောင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါက
ဓမ္မတာမဟုတ်ဘဲ သွေးထွက်ခြင်း ဖြစ်ပါက
Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်း သည် အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အဖြစ် အများဆုံးမှာ မိန်းမကိုယ်ရှိ ဘတ်တီးရီးယား သို့မဟုတ် မှို များ၏ သဘာဝမျှချေကို ပျက်စီးစေသော ရောဂါပိုးကူစက်မှု ကြောင့် ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ကူးစက်နိုင် သည်။
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော အခြားအကြောင်းရင်းများမှာ
မှိုကူးစက်မှုဖြစ်သော မက်ခရုနာ ဖြစ်ခြင်း။ ၎င်းသည် မိန်းမကိုယ်ကို ထိခိုက်စေသည်။
မိန်းမကိုယ်တွင် ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်မှု ဖြစ်ခြင်း
ကပ်ပါးကောင်တစ်မျိုး လိင်ပိုင်းအားဖြင့် ကူးစက် ခြင်း
ဆီးပူးညောင်းကျ သို့မဟုတ် Chlamydia ဖြစ်ခြင်း
လိင်အင်္ဂါတွင် ရေယုန်ပေါက်ခြင်း။ herpes simplex virus ကြောင့်ဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကူးစက် ရောဂါ။
သင့်တွင်အောက်ပါတို့ရှိပါက မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ် သော အရည်ဆင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ် ကင်ဆာ ရှိခြင်း
စအိုနှင့် မိန်းမကိုယ်ဆက်သွယ်ခြင်း ရှိပါက
မိန်းမကိုယ် လုပ်ဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်း ဖြစ်ပါက ( သွေးဆုံးချိန်တွင်ဖြစ်သော genitourinary syndrome)
Vaginal fistula ရှိခြင်း
ငါ့ဆီမှာ Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်း ဖြစ်နိုင် ချေကို မြင့်စေသော အချက်များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ-
လိင်ဆက်ဆံဖော် များစွာ ရှိခြင်း
လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အကာအကွယ် မသုံးခြင်း
ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အားနည်းစေသော အခြေအနေ တစ်ခုခု ရှိခြင်း
သားအိမ်အတွင်း ကိရိယာ တပ်ထားခြင်း
ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ သောက်နေ ခြင်း
Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ဆေးမှတ်တမ်းယူခြင်းနှင့် ရောဂါလက္ခဏာ များအကြောင်း မေးခြင်းဖြင့် မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းကို ခွဲခြားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်မဟုတ် သော အရည်ဆင်းခြင်း စတင်သော အချိန်၊ အရည်၏ အရောင်၊ အနံ့ရှိသလား၊ မိန်းမကိုယ် ဝန်းကျင်တွင် ယားယံခြင်း၊ နာကျင်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း ရှိသလား မေးမြန်း ပါလိမ့်မည်။ သင့်တွင် လိင်ဆက်ဆံဖော် တစ်ယောက်ထက် ပိုသလား၊ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းထဲသို့ ဆေးခြင်း လုပ်ဖူး သလား မေးပါလိမ့်မည်။
ရောဂါစစ်ဆေးမှုကို သေချာစေရန် အရည် နမူနာ ယူပြီး သို့မဟုတ် သားအိမ်ခေါင်းမှ ဆဲလ်များကို Pap test ဖြင့် ယူပြီး နောက်ထပ် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Vaginal Discharge (Leucorrhoea) (မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေပြီး ကုသမည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ မှိုကူးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပါက မှိုပျောက်ဆေး ခရမ်ကို မိန်းမကိုယ်တွင် လိမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင် သည်။ ဘတ်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်ပွားပါက ပဋိဇီဝဆေး သောက်ဆေး လိမ်းဆေး များဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ trichomona ကပ်ပါးကူးစက်ခြင်းအတွက် metronidazole သို့မဟုတ် tinidazole ဆေးများ သုံးနိုင်သည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ရောဂါပိုး ပေါက်ပွားမှု မရှိပါက ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် မိန်းမကိုယ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သံသယရှိသော ဓါတ်မတည့်သည့်အရာကို ရှောင်ပါ။ ရောဂါ လက္ခဏာများ သက်သာစေရန် ခရမ်လိမ်းနိုင်သည်။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် မိန်းမကိုယ်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သော အရည်ဆင်းခြင်း ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
မှိုကူးစက်သည်ဟု ယူဆပါက အလွယ်တကူ ဝယ်နိုင်သော မှိုပျောက်ဆေးခရမ် လိမ်းကြည့်ပါ။
မိန်းမကိုယ် ယားယံခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်ပါက အအေးဖိပေးခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
ကုသမှုစတင်ပြီး တစ်ပတ်အတွင်း ကွန်ဒုံးသုံးပါ။ သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံမှု မပြုမီ တစ်ပတ်စောင့်ပါ။
နူးညံ့သော ဆပ်ပြာအပျော့၊ နွေးသောရေဖြင့် မိန်းမကိုယ်ကို ပုံမှန်ဆေးကြောပါ။
မိန်းမကိုယ်အတွင်း ဘတ်တီးရီးယား ဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရှေ့မှအနောက်သို့ ပွတ်တိုက် သန့်စင်ပါ။
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ချည်ထည် အောက်ခံဘောင်းဘီ ဝတ်ပါ။ အလွန်ကျပ်သော အဝတ်များ မဝတ်ပါနှင့်။
အကယ်၍ သင့်တွင် မေးခွန်းများ ရှိပါက သင့်အတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေရရန် ဆရာဝန် နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
Vaginal Discharge: What’s Abnormal?. http://www.webmd.com/women/guide/vaginal-discharge-whats-abnormal. Ngày 13/06/2016.
Vaginal discharge. http://www.nhs.uk/Conditions/vaginal-discharge/Pages/Introduction.aspx. Ngày 13/06/2016.
Vaginal discharge.http://www.mayoclinic.org/symptoms/vaginal-discharge/basics/causes/sym-20050825. Ngày 13/06/2016.